Macluumaadka la soo ururiyay in la abuuro shabakad xiriir la macaamiisha ah, Pachipuro in tii pachinko
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Macluumaadka la soo ururiyay in la abuuro shabakad xiriir la macaamiisha ah, Pachipuro in tii pachinko
Waxaan qabaa in ay jiraan macaamiisha arka mar walba oo aad tagto qowladda pachinko ah. Macaamiisha ku noolayn maalin kasta Shigeku cagta ka badan shaqaalaha sida, loo yaqaan Dhaaquut in industry pachinko. Iyo, inkasta oo ay Waxaan u malaynayaa in lagama yaabo calaamadda fudud loo garan karo, dadka qaar loo yaqaan Pachipuro cunaya in pachinko ah.
qowladda pachinko, Macaamiisha ayaa loo arkaa asal ahaan Pachipuro, Intee baan marar badan la mamnuucay karaa, laakiin sidoo kale ka mid ah ay adag tahay in la sheego. In sida Pachipuro ama waa in haddii ay ugu fiican tahay inay xiriir shaqsi ah la joogtada ah, laakiin qofka waa noqdo qof aqoon ilaa xad in la hadli kartaa, waxaan u malaynayaa in ay tahay dabcan faa'iidada badan. joogtada ah
waxaa ka mid ah, laakiin sidoo kale ma ku xiran tahay dhacdooyinka iyo mudada dib u soo kabashada, in ay qowladda isla pachinko tegi doonaa on joogta ah maalin walba. Pachinko waa jecel yahay, dabcan, laakiin joogtada ah ee inta badan waa kuwa jecel in ay soo iibsan.
su'aasha haddii qof uu leeyahay si ay u fahmaan, laakiin dhici doona sheeko kale, maxaa yeelay, waa tarjumaadda inay qowladda isla pachinko tago maalin walba, waxaynu og nahay taagan wanaagsan dhaqdhaqaaqa sidoo kale ugu fiican. Tusaale ahaan, in madal la, Toka waxaa caadaysatay marar badan shalay, waxaan ahaan maal badan, hadal of sida aan ka baxay mar kale ka dib jeestay marar badan badan, ha adiga ama maqlaan kala duwan ee chat ah.
By fikrad ah inuu isku xiro shaqsi ah la joogtada ah, ka xogta, in aad noqon doonaa macluumaadka sida aan si fudud loo akhriyo, waxaa suurto gal ah in ay si fudud u helaan. Sida caadiga ah, ama ay jirto shaqo, waxaan u malaynayaa in ay jirto xitaa marka way adag tahay in si qowladda pachinko tagaan maalin kasta.
warbixin ka joogtada ah, laakiin waxaad laga yaabaa in sidoo kale mararka qaarkood waxyaabaha sida wanaagsan si walba, sidaa darteed i adiga ama in lagu qeexo kuwa eegno wanaagsan Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg hadlo. Waxaa ugu badan ee faa'iidooyinka ay u noqon in ay la socdaan joogtada ah ka heli.
waa xiriir shakhsi ee
ka dibna Pachipuro, laakiin waxaan qabaa tani waa in xaqiiqada ah ilaa xad macquul ah u adag. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan awooday inay isku xiraan shaqsi ah la fursad kasta oo Pachipuro, waxaan u maleynayaa in aan shaki ku jirin in ay kurbo ilo macluumaad in ka badan joogtada ah.
_x 000D_ Pachipuro waa, sababta oo ah waxay ka dhigi nool at pachinko, ayaa waxbarasho la taaban karo. Mid kasta oo ka mid ah Details iyo waxqabadka ama, line soohdinta, sida marka si ay u joojiyaan ama marka weerarka, waxaa la fahamsan yahay in ay macluumaad kala duwan for model kasta.
Si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo Pachipuro, ka duwan ee caadiga ah, oo aad ku xeeran ee wareegyada qowladda a pachinko delicious in search of guul. Waxaa halkaas macnaheedu ma aha maalin walba si ay tii pachinko isla, kuwa aan u tago oo keliya dukaanka isla pachinko laakiin waa dabcan, sidoo kale kuwa u taga inay tii pachinko kala duwan, sidoo kale waxaa sidoo kale lagu kala kulantay in la go'aamiyo in
Pachipuro, waxaan u maleynayaa in ay adag tahay . ugu fiican ee waa, Anigu garan maayo Pachipuro, waa in ay saaxiibo dadka had iyo jeer si fiican u soo baxay noqday. Markii aan isku dayay in uu la hadlo, haddii adiga ama Kuwashika 'in mishiinka macluumaadka, waxaa suuro gal ah in aad u hesho si ay u siiyaan macluumaad sax ah.